ကျွဲခေါင်းသီးလေး စားကြရာဝယ် .......... - Hello Sayarwon
ကျွဲခေါင်းသီးကို တော်တော်များများကတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အပြင်ခွံက အပြာရောင် ရင့်ရင့်၊ အမည်းရောင်လိုမျိုးရှိပြီး အတွင်းသားက ဖြူဖြူလေးနဲ့ စားလိုက်ရင် ဆိမ့်ချိုချိုလေးနဲ့ စားလို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျွဲခေါင်းသီးလေး ကို ပြုတ်ပြီး စားလေ့ရှိပြီး စားရတာလည်း အတော်လေး အရသာရှိလှပါတယ်။
ရေပေါ်မှာပေါ်တဲ့ အပင်ငယ်လေးတွေမှာ သီးတဲ့ ကျွဲခေါင်းသီးလေးတွေက ပုံစံလေး ဆန်းပြီး အရသာ ကောင်းသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရာသီစာ ကျွဲခေါင်းသီးလေး က ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူ ပြုပေးလဲဆိုတာကို အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား ……
ကျွဲခေါင်းသီးမှာ ဘယ်လို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲ …..
ရာသီစာ ကျွဲခေါင်းသီးလေးမှာ အခုလို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
အရသာရှိတဲ့ ကျွဲခေါင်းသီးလေး စားရင်း အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွဲခေါင်းသီး ခွက်တစ်ဝက်စာမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၉ ဂရမ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်က ကစီဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်တွေနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေး အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးချိုကို မြင့်တက်စေနိုင်တာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်​ မြင့်သူတွေအနေနဲ့ အများကြီး မစားသင့်ပါဘူး။
ကျွဲခေါင်းသီး မှာ fisetin၊ diosmetin၊ luteolin နဲ့ tectorigenin တို့လိုမျိုး ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် အရောင်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် နာတာရှည်ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကျွဲခေါင်းသီးက အဆံမှာရော အခွံမှာပါ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝတာပါ။
ကျွဲခေါင်းသီးမှာ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေသလို ဝမ်းမှန်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အူနံရံတွေရဲ့ အာဟာရ စုပ်ယူမှုကို ကောင်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိစေမှာပါ။
အဆာခံစေနိုင်တာကြောင့် ခဏခဏ မစားမိအောင် ထောက်ကူပေးပြီး သွေးတွင်းကိုလက်စထရော ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ကျွဲခေါင်းသီး ခွက်တစ်ဝက်စာမှာ တစ်နေ့တာ ပိုတက်ဆီယမ် လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ပါဝင်နေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကျွဲခေါင်းသီး ပုံမှန် စားသုံးပေးတာက လေဖြတ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်သလို နှလုံးရောဂါနဲ့ နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးမတိုးစေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကဲ…. ကျွဲခေါင်းသီးလေး ကို အရသာရှိရှိ စားရင်း အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရယူလိုက်ကြရအောင်လား …….
The Health Benefits of Water Chestnuts and Quick Recipes https://www.farrinstitute.org/water-chest-nuts/ Accessed Date 22 October 2021
Water Chestnut Nutrition Facts and Health Benefits https://www.verywellfit.com/carbs-in-water-chestnuts-2241835 Accessed Date 22 October 2021
ဂျူးမြစ်လေးကို တဂျွတ်ဂျွတ်ဝါးရတာ သဘောကျသူလေးတွေ အတွက်